Eveze Al Ikhoyili
Tianjin liwei iron & co sentsimbi., Ltd yasekwa ngo-2002, kwaye ibhalisiwe Tianjin Airport Industry Park. Ishishini ephambili Liwei osentsimini woveliso, inkqubo ehambisa kweemveliso ngentsimbi. Weemveliso uwahlule ube zahlulo zithathu: iipleyiti intsimbi, imibhobho zentsimbi kunye rebar ngentsimbi. plates Steel ziquka coil abandayo liqengqiwe intsimbi (CRC), coil intsimbi eshushu liqengqiwe (HRC), coil intsimbi kwalenza (GI) kunye coil intsimbi kwalenza prepainted (PPGI). Imibhobho Steel ziquka imibhobho ERW, imibhobho umphezulu omnyama, imibhobho Isefu, imibhobho ingenamthungo, imibhobho ingxubevange njalo njalo.
Thina bahambise wemveliso yesinyithi zombini kurhwebo lwasekhaya lwaza phesheya. Kwimarike yasekuhlaleni, thina inkampani umthengisi of ematyeni ngentsimbi enkulu kuquka iqela sentsimbi Baotou, iqela sentsimbi Hebei, iqela steel Tiantie. Nokusasaza ngaphezu kweetoni kwe 50,000 ka CRC, GI and PPGI ngonyaka ngamnye. Umthengi zethu ezithengisa ngezityalo zime saa amaphondo e Northern China, Ndawugcina intsebenziswano lwexesha elide kunye nathi.
Inkampani yethu attained imvume Rhweba ngaphakathi no Rhweba kunyaka ka-2008, kwaye ishishini kumazwe lukhula ngoku. Le khathalogu imveliso kumazwe angaphandle iquka CRC, GI, PPGI, Tinplate kunye Imibhobho ephakathi yentsimbi. Abathengi abavela eMpuma Yurophu, Umzantsi Melika, Mideast kunye Afrika elisekwe ubudlelwane zoshishino lwexesha ezinzileyo elide kunye nathi. Sithembiso abaxhasi bethu arcade games, ixabiso elifanelekileyo kunye nonikezelo ngokukhawuleza.
"Thembeka, Ukunyaniseka, Trust kunye Umnqwazi" into yokuhlola ishishini lethu. Sijonge phambili kokusinika imveliso egqwesileyo kunye neenkonzo kubo bonke abaxumi bethu axabisekileyo.
Umdlalo win-win phakathi kwinkampani kunye nabasebenzi, inkampani kunye nabaxumi na ekujoliswe kuwo wethu nokubaleka. Siyathemba sinako ukwenza unikezelo-ntle yoluntu lonke emva kwimpumelelo yeshishini.